Taariikhda sii deynta ee majaajilistaha caan ka ah "Game of carshiga" Netflix laga yaabee in la sifeeyay - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Taariikhda sii deynta ee ay ka soo horjeedaan 'Game of Thrones' 'Netflix ayaa laga yaabaa inay sifiican u shaandheysay - BGR
Muddo dheer ayaannu kuu sheegnay in Netflix ay bilaabi doonto bedelkeeda Game of Thrones dhamaadka 2019. Witcher The waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan Carshiga xafiiltami doona kaasoo kulankiisii ​​ugu horreeyay ee sanadkan bilaabi doona. Kaliya telefishanka taxanaha ah ee Sayidkii Raadiyaha laga bilaabo Amazon ayaa leh fursad fiican oo ah tan ku xigta of Game of Thrones laakiin showgan wuxuu wali ku jiraa soosaarid hore halka Netflix uu sameyn doono . Witcher waxaa lagu heli karaa qulqulka bilaha soo socda. Laakiin Netflix wali diyaar uma ahan inay shaaca ka qaaddo taariikhda la bilaabay taxanaha. Kaliya wuxuu siidaayay trailer-keedii ugu horreeyay dhowr bilood ka hor, isaga oo aan shaaca ka qaadin daaqad furan oo rasmi ah. Dhamaadka bishii hore, qof sheeganaya inuu yaqaan laga bilaabo taariikhda abuurkiisa ugu horeysay laakiin Netflix waxay si dhakhso ah u beenisay wararkaas . Hadda, waxaa soo baxday in Netflix ay si lama filaan ah shaaca uga qaaday taariikhda siideynta dhabta ah.
Xisaabaadka warbaahinta bulshada ee @NetflixNetherlands et @NetflixNL waxay watay fariintan Isniinta horteeda qof la tirtiray, via Macluumaadka Redan :
Source source: Macluumaadka Redan
Marka loo eego farriinta, waxaa jiray 97 hurdo hurdo la’aan ah oo sugaya illaa The Witcher's The Witcher's. taariikhda sii-daynta. Haddii macluumaadku sax yahay, taariikhda la sii daayay ee taxanaha telefishanka waa Disembar 17. Waa Talaado haddii aad la yaabto, Netflix badiyaa waxay daabacdaa waxyaabo asal ah oo cusub Talaadooyinka iyo Jimcaha
. Liistada kor ku xusan waxay sidoo kale ka kooban tahay cinwaanno kale oo badan oo la moodayey inay ku dhufteen Netflix, oo ay ku jiraan filimkii ugu horreeyay breaking Bad . Farriinta Netflix waxay qoslisay in ay jireen 30 hurdo hurdo la’aan ah ilaa bilowgii El Camino: filim cabsi leh kaas oo siin lahaa filimka taariikhda sii deynta Oktoobar 11. Waxaa soo baxday in tani ay tahay maalintii ugu horreysay ee filimka la bilaabay, kaas oo horey u ahaa mid rasmi ah.
Si kale haddii loo dhigo, waxay runtii u egtahay taariikhdan Witcher wuxuu noqon karaa heshiiska dhabta ah, kanaalka TV-ga ee la sugayay taxanaha taxanaha wuxuu dhici karaa maalmo uun ka hor kirismaska.
Source Source: Netflix